Home Wararka Ciyaaraha Real Madrid oo keentay Qorshe Arsenal ku heli karto Xidiga Martin Odegaard
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay wax ka weydiisay Arsenal suurtagalnimada in Emile Smith Rowe lagu daro heshiiska Martin Odegaard. .
Odegaard wuxuu sameeyay aragti wanaagsan muddadii yareyd ee uu joogay Waqooyiga London, Gunners-na waxay aad u dooneysay inay ku hesho adeegiisa si joogto ah.
Si kastaba ha noqotee, xidiga reer Norway ayaa la filayay inuu lacag xad dhaaf ah kaga tagayo Bernabeu, waxaana la filayaa inuu haatan go’aansaday inuu sii joogo Real Madrid ka dib markii dib loogu magacaabay Carlo Ancelotti .
Si kastaba ha noqotee , sida laga soo xigtay CBS Sports , in kastoo magaca Smith Rowe lagu xusay wadahadaladii u dhexeeyay Real Madrid iyo Arsenal, laakiin Gunners ayaan doonaynin inay fasaxdo ninka reer England.
Smith Rowe ayaa ku soo gabagabeeyay xilli ciyaareedkii 2020-21 afar gool iyo 7 caawin oo uu ka helay tartamada oo dhan Arsenal, kaasoo la sheegay inuu diiday dalab 25 milyan oo ginni ah oo ka yimid Aston Villa oo ku aadan saxiixiisa horaantii isbuucaan.
20 jirkaan qandaraaska uu haatan ku joogo Emirates wuxuu dhacayaa sanadka 2023, laakiin horumar ayaa la rumeysan yahay in laga sameeyay wadahadalada ku saabsan kordhinta.
Previous articleManchester United oo ku dhow inay dhameystirto heshiis 75 milyan ginni ah oo ay kula soo wareegeyso Jadon Sancho.
Next articleCroatia oo bar-baro ay galeen Czech Republic ugu soo baxay Wareega 16-ka Euro 2020